Sunday 3rd of July 2022 / 11:33:42 AM
अनलाइन दर्पण 2020-10-06
भौतिकशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार ब्ल्याक होलबारे रहस्य पत्ता लगाउने तीनजना वैज्ञानिकलाई दिने घोषणा भएको छ । आज नोबेल पुरस्कार कमिटीले रोजर पेनरोज, रिनहार्ड गेनजेल र आन्ड्रिया गेजलाई २०२० को भौतिकशास्त्रतर्फको नोबल पुरस्कारबाट पुरस्कृत गर्ने घोषणा
अनलाइन दर्पण 2020-08-27
भिडियो हेर्न मिल्ने माध्यमको रुपमा रहेको युट्युबले यस वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा एक करोड १४ लाखभन्दा बढी भिडियो हटाएको छ। कम्पनीको मापदण्ड तथा निर्देशिकाविपरीत रहेको ठहर गरिएका भिडियोहरु हटाइएको कम्पनीद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।&nbs
अनलाइन दर्पण 2020-06-18
आजको समयमा भिडियो नहेर्ने मानिस सायदै होलान । इन्टरनेटको विकास सँगै सामाजिक सञ्जाल तथा नयाँ प्रविधिको प्रयोग तिब्र रुपमा भईरहेको छ ।
युट्युब, फेसबुक, इन्टाग्राम, ट्विटर, टिकटक लगायत आदि सामाजिक सञ्जालमा भिडियोहरु देखिरहनु भएको छ होला । भ
अनलाइन दर्पण 2020-04-25
काठमान्डाैं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लकडाउनका समयमा इन्टरनेट सेवा सूचारु राख्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ । ‘लकडाउन’को समयमा केही इन्टनेट सेवा प्रदायकले समयमा महशुल भुक्तानी नगरेको कारण सेवा अवरुद्ध गरेको भन्ने गुना
धेरै लामो समयमा बन्ने काम पनि सेकेण्ड भरम
एक कल फोन गर्न दुई घण्टा उकालो चढ्नुपर्ने बाध्यता
डोल्पा, १४ कार्तिक । डोल्पाकाे मुड्केचुला गाउँपालिका–६ का स्थानीयवासी लेखबहादुर बुढा आफन्तलाई फोन गर्न कोठाना लेक सम्म जाने गरेका छन् । तीन घण्टा उकालो चढेर गाउँभन्दा माथि हिमालमा पुग्नु उहाँको रहर नभई बाध्यता हो । आफन्तको खबर बुझ्न र घरको क
काठमाडौं – नेपाल टेलिकमले ग्राहकहरूको सुविधाका लागि विभिन्न प्याकेजसहितको आकर्षक अटम अफर (Autumn Offer) उपलब्ध गराउने भएको छ । उक्त अफरअन्तर्गतको सेवा आज (२०७६ असोज ३० गते) देखि ९० दिन अर्थात् ३ महिनासम्म लिन सकिने व्यवस्था गरिएको
साइबर क्राइम भनेको के हो ? पढ्नुहोस
विद्युतीय उपकरणहरू कम्प्युटर, मोबाइल तथा यसको नेटवर्कको प्रयोग गरेर हुने कुनै पनि किसिमका आपराधिक कार्यलाई साइबर अपराध भनिन्छ । सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा कानुनद्वारा निषेधित कम्प्युटरसम्वन्धीत दुरुपयोग वा अपराधहरू नै साइबर अपराध हो । इन्टरनेटको प्
टेलिकमले ल्यायो सस्तो दरमा इन्टरनेटः प्रतिएमबी ३ पैसा मात्रै
अनलाइन दर्पण 2019-08-28
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले सहुलियत दरमा ग्राहकहरुलाई मोबाइल इन्टरनेट सेवा ल्याएको छ । विभिन्न प्याकेज योजना अन्तर्गत सस्तो दरमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न सकिने सुविधा ल्याएको हो ।
दैनिक रुपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी कम्पनीले ‘प्रतिदिन एक ज
बिग्रिएको एलइडी लाइटलाई यसरी बनाउनुहोस् इमरजेन्सी लाइट
अनलाइन दर्पण 2019-08-25
घरमा एलइडी बल्ब बिग्रियो भने हामीहरु त्यसलाई फ्याक्ने गर्छौं तर बिग्रिएको बल्बको उपयोगितबारे हामीलाई ज्ञान छैन । त्यस्ता बल्बहरुबाट इमरजेन्सीमिा काम लाग्ने लेम्प बल्ब बनाउन सकिन्छ । यसलाई बनाउन आवश्यक पर्ने चिजहरुको मूल्य ८० रुपयाँभन्दा कम छ । साथ
भुलेर पनि गर्नुहुँदैन स्मार्टफोनमा यस्ता कामहरु, पढ्नुहाेस् विज्ञको टिप्स
एन्ड्रोइड स्मार्टफोनको प्रयोग कसरी गर्ने ? यसबारे प्रायः प्रयोगकर्ताहरु सचेत नै देखिन्छन् । तर, फोनको प्रयोगसँग जोडिएका केही यस्ता टिप्सहरु हुन्छन्, जसलाई पछ्याउँदा ब्याट्री टिक्नेदेखि फोन रफ्तारमा चल्ने हुन्छ ।
फोनको प्रयोग गर्दा हुने ग
कसरी बन्यो गुगल ? गुगलका संस्थापक ल्यारी पेजको कथा
तपाई हामीलाई कुनै पनि विषयको बारेमा जानकारी चाहियो या ज्ञान चाहियो भने तपाई हामी सरण पर्ने भनेको गूगल कै हो I तपाई अहिले गुगल विनाको जिन्दगी कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ? शायद गार्है हुन्छ होला ।
तर, के तपाईलाई गुगलको अर्थ थाहा छ ? गणितको भाष
त्यो समयदेखि अहिलेसम्म कम्प्युटरमा कैयन परिवर्तन भएका छन् । हाम्रा औंला जति छिटो किबोर्डमा घ
घरमै बसी न्यून शुल्कमा यसरी गर्नुहोस् लोकसेवाको तयारी
अनलाइन दर्पण 2019-06-04
काठमाडौं । सरकारी जागिर भन्नेबित्तिकै धेरै नेपाली आकर्षित हुन्छन् । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने मुख्य ढोका लोकसेवामा जाँच दिनेको संख्या बर्सेनि लाखौँमा हुन्छ । अहिले पनि लोकसेवाले हजारौँ संंख्यामा कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन गर्ने समाचार आइरहे
अब हेल्मेटमा पनि एयरव्याग !
काठमाडौं । सुरक्षाको दृष्टीकोणले दुईपाङ्ग्रे सवारी एकदमै असुरक्षित मानिन्छ । सडक दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेमा धेरैजसो हिस्सा दुईपाङ्ग्रे सवारी चालकहरु रहने गरेका छन् ।
त्यसमा पनि टाउकोमा चोट लागेर मृत्यु हुनेको संख्या निकै धेरै रहे
विना सफ्टवेयर पेइनड्राइभमा यसरी पासवर्ड लगाउनुस्
अाफ्ना महत्वपूर्ण डकुमेन्टहरु राख्न तथा डाटा ट्रान्सफर गर्नका लागि पेइनड्राइभ सहज र उपयुक्त माध्यम हो । तर प्रयोग सजिलाे भएपनि यसमा भाइरसको जोखिम उच्च रहने गर्दछ ।
कसैले तपाईकाे पेनड्राइभको डाटा हटाउने डर र भाईरसबाट सुरक्षाका लागि यसकाे